January 2017 ~ Today's Mobile Training & Service Center
1:45 AM today's Blog No comments
Android ဖုန်းတွေအတွက် အသုံးဝင် Tool လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြု ရလွယ်ကူအောင် မြန်မာစာဖြင့်ဖန်တီးပေးထားပြီး Naing Unlocker လို့
အမည်ရတဲ့ Tool လေးပါ။ ဒီ Tool လေးကနေ
• Android ဖုန်းတွေကို Pattern / Pin / Password lock ဖြည်ခြင်း
• Xiaomi ဖုန်းများကို Pattern / Pin / Password lock ဖြည်ခြင်း
• OEM Unlock ပြုလုပ်ခြင်း
• Fastboot မှ Reset ချခြင်း
• Adb မှ Reset ချခြင်း တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်မှု့ရှိရင် ရယူအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
•°•°•°• Naing Unlocker Download Link •°•°•°•
password - မြန်မာ
11:16 PM today's Blog 1 comment
Huawei Y625-U32 Qualcomm Devices ကို Firmware ရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IMEI null ပြီး Baseband ပါ Unknow ဖြစ်သွားရင်
အောက်က ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ bat လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ ။
•°•°•°• bat file Download Link •°•°•°•
Zip Password - htetrkar
Xiaomi ဖုန်းများ TWRP ကနေ Root ရင်း Logo မှာသာရပ်နေခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနည်း
9:17 PM today's Blog No comments
Xiaomi ဖုန်းတွေ root လုပ်ဖို့ twrp ကနေ super su.zip ကို install လုပ်ပြီး logo မှာရပ်နေရင် twrp က ဝ sideload mode oင် computer မှာ adb sideload lazyflasher.zip လေးကို flash ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် reboot ပေါ့ ok
•°•°•°• Lazyflasher zip Download Link •°•°•°•
version 5.1.1 အထက်ဖုန်းများသာ
Meizu စမတ်ဖုန်းများအတွက် Gapps installer apk ( No need Root )
7:51 AM today's Blog No comments
Meizu စမတ်ဖုန်းများကို Gapps ထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ apk တစ်ခုပါ။
ဒီ apk ကို install လုပ်ပြီး apk ထဲဝင်ကာ Gapps နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ apk
တွေကို Download auto ရယူပြီး install လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့
အဆင်ပြေပါပြီ။ Meizu တွေအပြင် Xiaomi 6.0 အချို့ဖုန်းတွေမှာပါ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
•°•°•°• Meizu Gapps installer apk Download Link •°•°•°•
7:41 AM today's Blog No comments
စမတ်ဖုန်းအမျိူးအစား ၃၀ နီးပါးအတွက် Back light way လေးတွေကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တင်ထားတာလေးတွေကို စုစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးထားတာကြောင့် save ထားလို့လည်းရပါတယ်။
•°•°•°• Back light way Collection Link •°•°•°•
credit - All
Samsung Phone များ IMEI မပျောက်ပဲ လိုင်းမတက်လျှင်၊ network register လုပ်လို့မရလျှင် ဖြေရှင်းနည်း
6:26 AM today's Blog No comments
imei မပျောက်/ network lock မကျပဲနဲ့ဖုန်းက network register မှာ errors ဖြစ်နေပါတယ်........ဖန်ုးဝဲအမျိုးမျိုးတင်ကြည့်လည်း အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်......ခုကျွှန်တော်လိုပဲ error ဖြစ်ခဲ့ရင် ခုကျွှန်တော်ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးနဲ့ဖြေရှင်းကြည့်ပါ....ပထမဦးဆုံး ဖုန်းကို root လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင်ဒီဖိုင်လေးတွေကို install လုပ်ပေးပါ။
•°•°•°• ARIZAPatch.apk Download Link •°•°•°•
•°•°•°• Busybox pro apk Download Link •°•°•°•
ဒုတိယဖိုင်(busyboxpro) ကို super user grant လုပ်ပေးပါ။
installed to ကို /system/xbinကို ပြောင်းပေးပါ။
ပြီးလျှင် install လုပ်ပေးပါ။
software လေး run လာလိုက်မယ်...(ဖုန်းကို wifi ချိတ်ထားပါ)...
ပြီးရင် ပထမဖိုင် ARIZA Patch ကို run လိုက်ပါ။
Network Connection မှာ No ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ Apply Path ကိုနိပ်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် ဖုန်းဟာ reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာလျှင် အိုကေ သွားပါပြီ...
credit - Han lyin aung
ကျောင်းသားတွေအတွက် အိမ်စာတွေကိုကူလုပ်ပေးမဲ့ အထောက်အကူပြု iOS Software
8:30 PM today's Blog No comments
ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား၊ မကောင်းဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား။ အိမ်စာတွေပိနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အကောင်းဆုံး ကူညီပေးမယ့် AI ပါဝင်တဲ့ iOS app တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
အိမ်စာမေးလိုက်တဲ့ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ သမိုင်း၊ အင်္ဂလိပ် အစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ ပုစ္ဆာတွေနဲ့ မေးခွန်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ထည့် (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာနဲ့ အဖြေတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ တွက်ချက်ပြသထားတဲ့ အဖြေတွေကို ဖော်ပြ ပေးမယ့် app တစ်ခုဖြစ်ပြီး App ရဲ့နာမည်ကတော့ Socratic လို့ အမည်ရပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေအတွက် မကောင်းတာတစ်ခုက ကျောင်းမှာ သင်တာတွေကို အရေးမစိုက်တော့ပဲ ဒီ App ကိုပဲ အားကိုးလွန်းသွားရင် ပညာရေးစနစ်ကို အနည်းငယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျောင်းသားအတော်များများက နားမလည်တဲ့ မေးခွန်းတွေ သင်ခန်းစာတွေကို သိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ Google နဲ့ YouTube ပေါ်မှာ ရှာဖွေကြရပါတယ်။ ဒီ App ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ မေးခွန်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာနဲ့ app အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ AI စနစ်က မေးခွန်းအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးအဖြေကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာသားနဲ့ ဖြေတာတွေလည်းရှိသလို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို YouTube က video တွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google နဲ့ YouTube မှာ တကူးတက ရှာစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ကူရှင်ဆရာ၊ Guide ခေါ်စရာမလိုရလောက်အောင် ကူညီပေးမယ့် App တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
iPhone, iPad နဲ့ iPod Touch အသုံးပြုတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီး State ကျောင်းသား တွေကစလို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအထိ အထောက်အကူပြုပေးမယ့် app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
8:06 PM today's Blog4comments
Vivo Y15 ရဲ့နံမည်အကြီးဆုံး Firmware တင်ပြီး Sepaker error
တက်တဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Firmware ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
Firmware တင်လိုက်လို့ Deadboot ဖြစ်သွားရင် ဒီ Firmware နဲ့
ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်သေးရင်တောင်မှ ရယူထားသင့်ပါတယ်။
•°•°•°• Vivo Y15 Speaker & Dead Fix Firmware Download Link •°•°•°•
password - mofmofmofmkkz
credit - Myo Ko Ko Zaw
7:55 PM today's Blog No comments
iPhone ကို Hardware ပိုင်းပြု ပြင်လိုသူများအတွက် အသုံးဝင်
Schematic Diagram တွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ iPhone 2G မှစလို့
ခုလက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone7plus အတွက်ပါ ပါဝင်ပါတယ်။
•°•°•°• iPhone All Schematic Download Link •°•°•°•
Samsung 2016 ဖုန်းအချို့အား FRP Unlock Tutorial Video
7:40 PM today's Blog No comments
Samsung 2016 ဖုန်းအချို့အတွက် FRP Bypass ပြု လုပ်ခြင်း Video
Tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Video လေးကတော့ Galaxy Core Prime 2016 နဲ့
ရှင်းပြပေးထားတာပါ။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြည့်ပြီးသားပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
Sydesync နဲ့ Quick Shortcut Maker apk ကိုအသုံးပြု ထားတာပါ။
ရယူနည်းများကိုလည်း ပြသထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။
•°•°•°• Video Tutorial Link •°•°•°•
4:41 AM today's Blog No comments
Mobile Hardware service ပိုင်းအတွက် အထောက်အကူပြု ပုံများဖြစ်ပါတယ်။
Mobile ဖုန်းများကိုပြင်ဆင်ရာတွင် စက်ပြားပေါ်မှာ ic တို့ဘာတို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
လိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပုံများကို save ထားပြီးအမြဲတမ်းလေ့လာနိုင်ရန်
လိုအပ်ရာ ပုံများကိုပေးထားတဲ့လင့်ကနေ ရှာဖွေရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• Visit & Download Link •°•°•°•
9:23 PM today's Blog 1 comment
Android ဖုန်းတော်တော်များများအတွက် Backup / Restore ပြုလုပ်ရတာ
အရမ်းမိုက်တဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Virus တွေကိုလည်း Remove ပြု လုပ်နိုင်သေး
တယ်လို့သိရပါတယ်။ အသုံးပြု ကြည့်ချင်ရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။
Crack version ကိုအောက်က Username နဲ့ Password ထည့်ပြီးဝင်ပါ။
•°•°•°• CM2 Crack version Download Link •°•°•°•
Custom Binary Blocked by FRP Lock bypass Firmware for ( 2016 ) J1 , J2 , J5 , J7
9:10 PM today's Blog No comments
Software error ကြောင့် Samsung Galaxy ( 2016 ) J1 , J2 , J5 , J7 ဖုန်းတွေမှာ
Custom Binary Blocked by FRP Lock ကျခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ Firmware တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးတွေကို တင်ပြီးရင်တော့ Custom Binary Blocked by FRP Lock ဆိုတဲ့အနေအထားကနေ
ကျော်လွန်နိုင်မှာပါ။ လိုအပ်ရာ Firmware ကိုရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• Firmware များအားရယူရန် •°•°•°•
refer - limnss.org
Samsung Galaxy Note5အား sboot ဖိုင်သုံးပြီး FRP Bypass ပြု လုပ်ခြင်း
8:02 AM today's Blog No comments
Samsung Galaxy Note5အား sboot ဖိုင်သုံးပြီး FRP bypass
ပြု လုပ်ခြင်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးသက်ဆိုင်ရာ model အတွက်
•°•°•°• Sboot files Download Link •°•°•°•
Download ရယူလို့ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို Odin ရဲ့ PDA မှာထည့်ပြီး Firmware တင်သလို
flash ပေးလိုက်ပါ။ Sboot ဖိုင်ထည့်ပြီးရင်တော့ Miracle box crack အသုံးပြု ရပါမယ်။
Miracle ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Samsung ဆိုတာကိုသွားပါ FRP Reset ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။
ဖုန်းကို Download mode သွင်းပြီး Miracle နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ Start button ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Miracle မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားရင်တော့ FRP Lock ပြည်ပါပြီ။
Xiaomi မှ အလုပ်ထွက်ပြီး ၁ ပတ်အကြာမှာ Facebook သို့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ Hugo
7:43 AM today's Blog No comments
ဟူဂိုဘာရာ ဆက်သွယ်လာခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို စ်ိတ်လှုပ်ရှားရပြီး ပျော်ရွှင်တက်ကြွခဲ့ရတယ် လို့ ဖေ့စ်ဘုတ် အကြီးအကဲဖြစ်သူ မက်ဇူကာဘတ် က ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဟူဂိုဘာရာ ဟာ ဖေ့စ်ဘုတ် က စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Oculus Team မှာ Lead အဖြစ်တာဝန်ယူရဖို့ သေချာသွားပြီလို့ သတင်းတွေ က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မက်ဇူကာဘတ် ဟာ Android OS ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစ်ဖက်တလမ်းက ကူညီလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဟူဂို ကို သိရှိခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် လို့ သူရဲ့ ဖေ့်စဘုတ် မှာ ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဟူဂို ရောက်လာတဲ့အတွက် VR တွေရဲ့ အနာဂတ် ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့သွားရပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဟူဂိုဘာရာ ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Google က နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ရှောင်မီရဲ့ နိုင်ငံတကာဌာန မှာ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ရှောင်မီကို တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်အတွင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှု တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်ရာမှာ ဟူဂိုဘာရာဟာ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟူဂိုဘာရာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ ရက်က မှ တနင်္လာနေ့ကမှ ရှောင်မီကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အခုလို ဖေ့စ်ဘုတ် ကို ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖေစ်ဘုတ် ရဲ့ မိုနိုပိုလီဆန်ဆန် ကစားချင်တဲ့ စီးပွားရေး ကစားပွဲဟာ တစ်စစ အဖြေပေါ်လာပြီ လို့ အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ ပြိုင်ဘက်လူမှုကွန်ယက် သမားတွေ က ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်သစ်အင်တာနက်လောကရဲ့ Brain Drain ဦးနှောက်ယိုစီးမှုတစ်မျီုး အဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Redmi Note 1s gucci အား Wifi နဲ့ Bluetooth error ဖြေရှင်းနည်း
Redmi Note 1s အတွက် Wifi နဲ့ Bluetooth error တက်ရင်
ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ Mi account lock ဖြည်ပြီးရင် ဒီ error တက်တာ
များပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီ bat ဖိုင်လေးကို ဖုန်းအား fastboot အနေအထားမှာ
ထားကာ Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ bat ဖိုင်လေးကို ရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• Wifi & Bluetooth error fix download link •°•°•°•
5:12 AM today's Blog No comments
Cherry Mobile ကို FRP Lock ကနေလို့ Bypass လုပ်ချင်သူတွေအတွက်
Video Tutorial ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Group မှာ တောင်းဆိုထားတာလည်း
တွေကတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Video ကြည့်ပြီးလေ့လာရအောင်
No need OTG , No need PC
•°•°•°• Video Tutorial See Link •°•°•°•
4:53 AM today's Blog No comments
Circuit ပတ်လမ်းအကြောင်းကိုအခြေခံ ကျကျလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Mobile phone နဲ့ပြသပြီးရှင်းပြထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ အခြေခံကြိသိသွားရင်တော့ အကုန်ပြင်လို့
ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Schematic နားလည်ခြင်း ဖတ်တတ်ခြင်းသည် ပတ်လမ်းလိုက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့
သို့သော် schematic ကိုနားလည်သောအမြင်
နှင့် PCB ပေါ်က တကယ့်လက်တွေ့အမြင်သည်
တစ်ခါတစ်ရံမှာ printed ပေါ်က PCB ပတ်လမ်းက ကြည့်ရင် ပိုလွယ် နားလည်လွယ်သလိုဖြစ်တတ်ပြီး Schematic
အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာချဆွဲပြီးမှ နားလည်နိုင်တဲ့
တကယ့် စက်ပြားကိုမပြင်ခင် တကယ်ပြင်နေရ
PCB ပေါ်တွင် လက်တွေ့စက်ပြင်နေရပေမယ့်
လွယ်ကူအောင် diagram အဖြစ်ပုံဖော်စဉ်းစား
Diagram မလိုပဲ စက်ပြင်နေကြပေမယ့်
လိုအပ်တဲ့အခါ အာရုံမှာ diagram ဆွဲနေတတ်ကြတာ စက်ဆရာများရဲ့အကျင့်ပါပဲ
Diagram မသိ Schematic နားမလည်သော
စက်ဆရာများအဖို့ကတော့ လက်တွေ့ PCB ပေါ်
သူတို့အဖို့ လမ်းဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီး ဆက်လက်တွေး
ခေါ်ယူဆဖို့ က စိတ်ထင်တဲ့ဟာ လဲကြည့်ဖို့လောက်ပဲ
ရှိတော့ပြီး မရေရာဘူး မသေချာဘူး ဆိုတဲ့
သို့အတွက် diagram သည် စက်ပြင်ရာတွင်
Diagram မရှိတဲ့ စက်မျိုး ပတ်လမ်းမျိုးကို
Diagram မရှိဘဲ ပတ်လမ်းလိုက်နည်း
အမြင်မတူတာများ ရှိရင်လည်း ဖလှယ်ချင်
direct connection (or)0Ohm
( Start to End )
( End to Start )
စတဲ့အခြေခံနည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လမ်းကြောင်းလိုက်ရာမှာ အမျိုးအစား
( ၂ )မျိုး ထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်
(၁) ဗို့အားလမ်းကြောင်းများကို ပတ်လမ်းလိုက်ခြင်း
( ၂ ) အချက်ပြ Signal လမ်းကြောင်းများကို
ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့က Signal လမ်းကြောင်းအထဲမှာ Data လမ်းကြောင်းတွေ
Control Signal လမ်းကြောင်းတွေကိုပါ
Data Signal များ
Control Signal များ
Logic On Off Signal Enable Signal များ
I2C BUS Memory လမ်းကြောင်းများ
သည် Voltage တစ်ခုအပေါ်အခြေခံသော
Signal များဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းရာလမ်းကြောင်းတွင် Coupling
ဗို့အားလမ်းကြောင်း ပတ်လမ်းလိုက်ခြင်း ယူဆမှု
Vcc ခေါ် အပေါင်းလမ်းကြောင်းအကွဲများ
ဥပမာ TV မှာဆို
5V 8V 24V 110V 12V စသဖြင့်
အနှုတ်လမ်းကြောင်းအကြားတွင် သွားလာဆက်နွယ်နေကြပြီး GND ချထားသော
အခြေအနေမျိုးရှိသလို အပေါင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုခုမှ ဗို့အားလျှော့ချရယူထားခြင်း
Point တစ်ခုအနေနဲ့သိထားရင် ရပါပြီ
ဥပမာ CRT TV စက်ပြားထဲမှာ
Standby 5V သည် Memory Ic
သို့မဟုတ် Remote Sensor
Power On 5V သည် Tuner MB
Power On 8V သည် RGB GND 8V
စသဖြင့် နေရာတစ်နေရာ Point တစ်ခုခုဖြင့်
ဒါ.ကြောင့် Diagram မပါဘဲ
Standby အပေါင်းဗို့အားလမ်းကြောင်း နဲ့
Power On အပေါင်းဗို့အားလမ်းကြောင်းတွေကိုတော့
Point တစ်ခုအနေနဲ့ ကြိုသိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
Switch On မှထွက်လာမယ့် Voltage
Enable Signal ရမှ ထွက်လာမယ့် Voltage
Process တစ်ခုခုက command ပေးမှ
ထွက်လာမယ့် Voltage စတာတွေကိုလည်း
Point တစ်ခုအနေနဲ့ ကြိုသိထားနိုင်ပါက
ဥပမာ Recording လုပ်ပြီး Mic Bias
Post လည်းရှည်သွားပြီမို့ တော်လောက်ပြီဗျာ
credit - နေ၀င်းအီလက်ထရောနစ်
4:22 AM today's Blog No comments
Software ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Android တွေအတွက် Firmware လိုချင်တာလား
apk တွေ game တွေဒေါင်းချင်လား Device နဲ့ပတ်သတ်ပြီး info တွေသိချင်လား
imei ပိုင်းကော အစုံအလင်ပါဝင်တဲ့ Tool Hero apk လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ apk ထဲမှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တာတွေအပြင် အခြားအသုံးဝင်တာတွေလည်း ပါသေးတယ်။
Root access နဲ့အသုံးပြု နိုင်မဲ့ Feature တွေတောင်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲ သုံးမယ်ဆိုယူလိုက်ပါ။
ပေးထားတဲ့ apk ကိုယူပြီး update လုပ်ချင်ရင် auto update ပေးသေးတယ်နော် ;)
•°•°•°• Too Hero apk Download Link •°•°•°•
4:05 AM today's Blog No comments
Mobile ဖုန်း Brand တော်တော်စုံစုံလင်လင်အတွက် Firmware link များကို
တစ်နေရာထဲကနေ ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Software သမားတွေအတွက်တော့
ရွှေပါပဲ။ Download ရယူကြည့်လိုက်အုံးဗျ :)
•°•°•°• Download Now •°•°•°•
သင့်ဖုန်းကို လွယ်လွယ်ကူကူပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အချက်များ
2:35 AM today's Blog No comments
ဖုန်းကို ပျက်စီးစေတဲ့အချက်များထဲမှာ သင်ထင်မှတ်မထားတဲ့ အရာများစွာ ဖြစ်နေပါတယ်။ app တွေ ဒေါင်းလုဒ် ရယူခြင်းက သင့်ဖုန်းအတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးကတော့ သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆုငိတော့ အချို့ app တွေဟာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ပါနေနိုင်တာကြောင့်ပေါ့။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး။ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ပြုမူလုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်း သင့်ဖုန်းကို ဖျက်စီးသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားရမှာပါ။ အဲ့ဒီအရာတွေကတော့
*** နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ခြင်း ***
ဖုန်းကို နေပူထဲ ဘယ်တော့မှ မထားခဲ့ပါနဲ့။
*** ဘောင်းဘီနောက်ကျောအိပ်ကပ်ထဲ ထည့်သိမ်းထားခြင်း ***
နောက်ကပ်ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားတာဟာ ထိုင်ရင် ဖုန်းကို ကွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
*** ဈေးပေါပေါဖြင့်ရသော အားသွင်းကြိုးများ ***
အဲဒီလိုအားသွင်းကြိုးအများစုက ပါဝါကို လိုသလောက် မဖြည့်ပေးနိုင်ပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပိုင်းကို လုံးဝထည့်သွင်းမထားတာပါ။
*** ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံးဖွင့်ထားခြင်း ***
ဖုန်းကို အနားမပေးဘဲ အဆက်မပြတ် အသုံးပြုခြင်းက ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
*** တခြားပစ္စည်းများနဲ့အတူ ရောပြီး ထည့်သိမ်းထားခြင်း ***
သော့တွဲများ၊ အကြွေစေ့တွေ စတာတွေနဲ့ အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်သိမ်းထားပါက ဖုန်းမှာ ခြစ်ရာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
2:22 AM today's Blog No comments
Y610-U00 မှာအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ Deadboot error နဲ့ imei error တို့အတွက်
ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဖိုင်များကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ ရယူပြီးအသုံးပြု ကြပါ။
•°•°•°• Download Link •°•°•°•
imei error fix
2:08 AM today's Blog 1 comment
XiaoMi Devices Services Tool ဟာ XiaoMi ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Function အနည်းငယ်ကို သုံးရလွယ်ကူအောင် One Click Function ဖြင့် လုပ်ထားသော Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Tool မှာ ပါဝင်တဲ့ Function ကတော့ ( ၁၂ ) မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။
Function တစ်ခုချင်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ နဲ့ အသုံးပြုနည်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိဖုန်းဟာ Recovery Mode Or Sideload Mode မှာ ရောက် မရောက် သိချင်တဲ့အခါ ဒီ Function ကိုအသုံးပြုပါ ။
ဒီ Function ကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့
- Devices Name
- MIUI Version
- Serials No
စသည့် data (6) မျိုးကို သိချင်တဲ့အခါ Phone ကို Recovery Mode Or Sideload Mode ခေါ်ပြီး Devices သိပြီဆိုတာနဲ့
တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို သိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Function ကတော့ XiaoMi Phone တွေ Pattern , Password Lock ကျနေတဲ့အခါ Recovery Mode ခေါ်ပြီး တစ်ချက်နှိပ်ယုံဖြင့်
Lock ပျက်စေတဲ့ Function ပါ ။ ( မှတ်ချက် ။ ။ Pattern Lock ဖြည်တဲ့ ဖုန်းမှာ XiaoMi Account ရှိနေရင်တော့ Mi Account Lock ထပ်ကျပါမယ် )
ဒီ Function ကတော့ Recovery Mode မှာ လိုအပ်တဲ့ Function များအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ Recovery Mode ကပြန်ထွက်ချင်တဲ့ အခါ Power
ပိတ်စရာ မလိုဘဲ Click တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ Normal Mode ကို ပြန်ရောက်စေသော Function ပါ ။
Recovery Mode ကနေ Fastboot Mode ကို တန်းရောက်ချင်တဲ့ အခါ သုံးတဲ့ Function ပါ ။ ( adb သိရင် Fastboot Mode ကို ရောက်ဖို့
Key နှိပ်ပြီးသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ ။ )
မိမိ Phone ဟာ Fastboot Mode မှာ ရှိ မရှိ သိချင်တဲ့ အခါ စစ်တဲ့ Function ပါ ။
ဒီ Function ကတော့ Firmware တင်တဲ့အခါမှာ Product Name မှားတင်မိရင် IMEI Error ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ IMEI Error မဖြစ်စေဖို့ Product Name
စစ်တဲ့ Function ပါ ။
( 8 ) Fastboot Reboot
Fastboot Mode လိုအပ်တဲ့ Function များအသုံးပြုပြီးတဲ့ အခါ ပြန်ထွက်ချင်အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
ှ(9) Qloader Mode ( ADB )
ဒီ Function ကတော့ Normal Mode ကနေ Qloader Mode Or 9008 Mode ကို ရောက်စေသော Function ပါ ။ Qloader Mode ရောက် မရောက် သိချင်ရင် Devices Manager
ဖွင့်ကြည့်ပါ Port မှာ 9008 Port ပေါ်နေရင် သိပါပြီ ။
( 10 ) Qloader Mode ( Fastboot Mode 1 )
ဒီ Function ကတော့ Fastboot Mode ကနေ Qloader Mode Or 9008 Mode ကို ရောက်စေသော Function ပါ ။ Qloader Mode ရောက် မရောက် သိချင်ရင် Devices Manager
ဖွင့်ကြည့်ပါ ။ Port မှာ 9008 Port ပေါ်နေရင် သိပါပြီ ။ ဒါက Fastboot ကနေ Qloader Mode သွားတဲ့ Method 1 ပါ ။
ဖွင့်ကြည့်ပါ ။ Port မှာ 9008 Port ပေါ်နေရင် သိပါပြီ ။ ဒါက Fastboot ကနေ Qloader Mode သွားတဲ့ Method2ပါ ။
ဖွင့်ကြည့်ပါ ။ Port မှာ 9008 Port ပေါ်နေရင် သိပါပြီ ။ ဒါက Fastboot ကနေ Qloader Mode သွားတဲ့ Method3ပါ ။
မှတ်ချက် ။ ။ ( 1 ) Tool ကိုဖွင့်လို့ Adb Error တက်သော် နောက်ကွယ်မှာ Run နေသော Adb File များကို ဖျက်ပေးပါ ။
(2) Tool နှင့် အတူ Adb File များအတူထားပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ ။
(3) တစ်ခါဖွင့်လို့ Error တက်သော် ပိတ်ပြီး နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပေးပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည် ။
XiaoMi Devices Services Tool Download Link
•°•°•°• Download Here •°•°•°•
credit - Ko Sai
6:33 PM today's Blog No comments
pmu နှစ်​လုံးသုံးတဲ့ samsung ​တွေမှာ vph ​ရှော့ဖြစ်​ရင်​ vbat နဲ့ vph ကြားမှာ pmu အ​သေးခံထားတာ​ကြောင့်​ supply ချိတ်​တဲ့ vbat အခြမ်းမှာအမ်​ပီယာ မဆွဲ​တော့ပဲ တစ်​စိတ်​​လောက်​ပဲတက်​​နေလိမ့်​မယ်​ vph ဘက်​မှာတိုင်းကြည့်​ရင်​ ground ကျ​နေပြီး အမ်​ပီယာအပြည့်​တက်​​နေပါမယ်​ ​ဒါက huawei ​တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်​ huawei ​တွေမှာဆို pm8029 သုံးတဲ့ဘုတ်​​တွေမှာ vbat နဲ့ vph ကြားမှာ fet ခံပြီးသုံးပါတယ်​ vph မှာ​ရှော့ဖြစ်​ရင်​ ကြားခံဖြစ်​တဲ့ fet ပူလာပြီး အမ်​ပီယာလဲ ဆွဲ​နေပါမယ်​ ​နောက်​တစ်​မျိုးက huawei မှာပဲ pm8110 သုံးတဲ့ ဘုတ်​​တွေမှာဆို vbat နဲ့ vph ကြားမှာ pm8110 ခံပြီးသုံးထားတဲ့အတွက်​​ကြောင့်​ vph ​ရှော့ဖြစ်​ရင်​ ကြားခံဖြစ်​တဲ့ pm8110 ရဲ့ ​ထောင့်​​လေးမှာ လာပူတာပါ ​ထောင့်​​လေးမှာပူရတဲ့အ​ကြောင်းရင်းက vbat က​နေ vph ကို pmu ရဲ့ ​ထောင့်​နားက​နေ ဖြတ်​သွားတာ​ကြောင့်​ပါ model တစ်​မျိုးခြင်းဆီမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ fet ic ​တွေရဲ့အတွင်းပိုင်း လုပ်​​ဆောင်​ချက်​ စနစ်​ခြင်းမတူတာ​ကြောင့်​ vph ​ရှော့ဖြစ်​တာခြင်းတူ​ပေမယ့်​ များ​သေားအားဖြင့်​ ပုံမှန်​​ရှော့ဖြစ်​တဲ့ အ​​ခြေအ​နေမှာ ကွဲလွဲ​နေတဲ့ အမ်​ပီယာအ​နေအထား​တွေကို ​သေခြာ​လေ့လာကြည့်​ရင်​ ​တွေ့ နိုင်​ပါတယ်​ ic ​​တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းလုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေမသိရင်​​တောင်​ supply က အမ်​ပီယာကိုကြည့်​ပြီး ​စဉ်းစား​တွေး​တောတက်​မယ်​ဆို electronic အ​ခြေခံမရှိလဲ ဖုန်းပြင်​စားလို့ ရပါတယ်​ ကျန်​တာ​တော့ ကိုယ့်​ရဲ့ ​လိုက်​စားမှု​ပေါ်မူတည်​ပြီး ဆက်​​လေ့လာလို့ ရပါတယ်​။
refer - Phyo Htut Kyaw
Samsung ဖုန်းများ Adb enable ဖိုင်ရယူခြင်းနှင့် Frp ကျော်နည်း
6:15 PM today's Blog No comments
Samsung ဖုန်းတွေ Adb သိရင် Frp ကျော်လို့ရတယ်ဆိုသိကျမှာပါ
သိပ်အသုံးဝင်တာပေါ့ Samsung တွေ At Command သုံးမရ (modem အလုပ်မလုပ်တဲ့ဖုန်းတွေ)
Slide Sync မရတဲ့ဖုန်းတွေ
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ browser ၀င်ပေါက်မရတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဥပမာ wifi မရတော့တာတွေ ၊ Logo ရပ်နေတာတွေ အပြင် အခြား Error အများကြီးပါ
ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး Frp ကျော်ပြီးတာနဲ့ Official stock rom or sboot boot ထည့်ပေးလိုက်ရင်
ဒီတော့ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ frp ကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ stock rom လေးရှိသင့်ပါတယ်။
ဒီ Adb Enabler ဆိုတဲ့ tar ဖိုင်လေးကို ဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့
Combination ဆိုတဲ့ Samsung ရဲ့ Factory Firmware တွေကနေလာပါတယ်။
COmbination တွေမှာလဲ Build Number တွေ Version တွေရှိပါတယ်
Adb Enabler လဲဒီလိုပါပဲ တင်မရတာတွေမျိုးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။
Combination Firmware ထဲက sboot ရယ် BOOT ကို ထုတ်ပြီး
Adb Enabler လို့ခေါ်ကျပါတယ်။
boot ကြီးပဲ တစ်ဖိုင်ထဲသွင်းလဲ adb သိပါတယ်။
ဒီတော့ မိမိမှာ Combination Firmware တွေရှိမယ်ဆိုရင်
adb enabler ဖိုင်တွေရှိတာနဲ့အတူတူပါပဲ
အချို့ကျတော့ combination ကို ဖြည်တယ်
sboot နဲ့ BOOT ကို tar ပြန်လုံးပြီး odin နဲ့သွင်းတယ်။
ဒါလဲရတာပဲ. အချို့ကျတော့ ကျွန်တော်လို့ပျင်းတယ်ဗျ
Miracle Crack or Z3x သုံးတယ်ဗျ
ဘာလို့ဆို အဲ့ Software တွေက Full Firmware အတွင်းက ဖိုင်တွေကို
မိမိ နှစ်သက်ရာရွေးချယ်သွင်းလို့ရလို့ အလုပ်မရူပ်ဘူး
Combination Firmware တွေဘယ်မှာရနိုင်သလဲဆိုရင်တော့
ပြီးတော့ Google မှာပတ်ရှာအများကြီးပဲ
ပြီးရင် Frp ကျနေတဲ့ ဖုန်းကို Download Mode ၀င်လိုက်
Miracle Crack ကို ဖွင့်
မရှိသေးရင် ဒီမှာ Download ရယူပါ။
ပြီးရင် Samsung Tabs ကိုသွား
Write Flash ကိုရွေးပါ။
PDA မှာ မိမိ Combination ဖိုင်ကိုရွေးပေးပါ။
Display List ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
မိမိ Combination ထဲမှာပါတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
sboot ရယ် boot ရယ်ကိုပဲ အမှန်ခြစ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။
sboot ကိုထားခဲ့ပြီး BOOT တစ်ခုထဲအမှန်ခြစ်လဲရပါတယ်။
ပြီးရင် Start နှိပ်လိုက်ရင် Flash လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပြန်တက်လာရင် Adb Auto သိနေပါလိမ့်မယ်။
Adb သိသွားရင်တော့ Frp ဖြည်လို့ရပြီပေါ့
ဒီ bat ဖိုင်လေးကို Download ဆွဲလိုက်ပါ။
စာရိုက်ပျင်းသူတွေအတွက် bat လေးလုပ်ပေးထားတာ 🙂
ပြီးရင်တော့ Setup Wizard ကို ကျော်ကြည့်
Account မတောင်းပဲ Home Screen ကိုရောက်မယ်
Settings ထဲက Developer Option နဲ့ Oem Unlock ကို
အမှန်ခြစ်ပြီး Factory Reset ချလိုက်ပါ။
credit - ဖြိူးချမ်း Regeneration Mobile Service & Training Center
6:02 PM today's Blog No comments
Diode ဆိုတာဟာ Electronice ပစ္စည်းတွေအတွက် အရေးပါလှတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ်။ Diode နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဟာထဲထဲဝင်ဝင်သိပြီးပြီလား ???
Diode တိုင်းတာပုံ တိုင်းတာနည်းအား သင်အခြေခံကျကျလေ့လာပြီးပြီလား ???
Diode နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သင့်အနေနဲ့ အခြေခံကျကျလေ့လာလိုရင်တော့
အခုပေးထားတဲ့လင့်လေးကနေ သင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဲဗျာ အများကြီးပြောမနေတော့ဘူး။
Diode နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာ ...
•°•°•°• Diode အကြောင်းဝင်ရောက်လေ့လာရန် •°•°•°•
refer - Aung Tun Electronice
3:16 AM today's Blog No comments
Galaxy Grand Prime model number *SM-G530H*
အတွက် Firmware လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ model လေးကို Firmware
တင်ကြတဲ့အခါ error အမျိူးမျိူးတက်ကြတာကြောင့် ဒန Firmware လေးကို
share ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါလေးကိုတော့ ကိုမျိူးကိုကိုဇော်မှ တင်ပေးထားတာပါ။
Repair Firmware လို့လည်းနံမည်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ် Region အလုံးမဆို
ဒီ firmware နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ Firmware တင်ဖို့လိုအပ်ရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို
•°•°•°• Firmware Download Link •°•°•°•
password - myokokozawnewstarphoneservice
Xiaomi ဖုန်းများအား Firmware တင်ခြင်းနည်းလမ်းနောက်တစ်မျိူး
1:11 AM today's Blog No comments
Mi တွေ firmware တင်နည်း နောက်တစ်နည်းဗျာ ကျနော်ကတော့ ဒါလေးနဲ့ပဲကစ်တာ အလုံးတော်တော်ကိုများနေပါပြီ AF tool လေးနဲ့ဗျ သူက MTK လဲ ရတယ် MTK ကတော့ ပထမအကွက်ပေါ့ ကဲစမယ် ကျနော် Mi note 1SCT နဲ့ဥပမာပြထားပါတယ်။
mi fastboot flash firmware တစ်ခုဒေါင်းပြီးတာနဲ့ zip တွေ ဖြည်ပြီးတာနဲ့ image ဆိုတဲ့ folder ထဲကို ခုကျနော်ပေးမယ့် Fastboot_flash all bat ဆိုတဲ့ bat ဖိုင်လေးထည့်ပေးပါဗျ ပြီးတာနဲ့ tool ကိုဖွင်လိုက်ဗျာ ပြီးတာနဲ့ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း သွားပြီးတာနဲ့ ခုန image ဆိုတဲ့ folder ထဲက ခုန copy ကူးထည့်ထားတဲ့ fastboot_flash_all.bat ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပြီး download လေးနှိပ်ပြီး ဖုန်းကို fastboot ကနေ ကြိုးထိုးယုံပါပဲဗျ တင်သွားပါလိမ့်မယ်။
tool နဲ့ bat ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။
credit & pass-mgkhinmgkhin
အခြားဖုန်းများနှင့်မတူ Huawei P10 ရဲ့ထူးခြားချက်များ
7:50 PM today's Blog No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက အကောင်းဆုံး ဟွာဝေးဖုန်း ဟာ 8950 ပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကျတော့ 8812 ဟာ အကောင်းတကာ့ဆုံး အကောင်းဆုံး မော်ဒယ် ပါ။ အဲဒီ မော်ဒယ် ၂ ခု စလုံးဟာ အရမ်းလည်း “မာ” တယ်။ အကြမ်းခံတယ်။ ရေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ တိုင်ကီထဲပြုတ်ကျတာတောင် ပြန်ဆယ်၊ ပြန်ပြီး ဖွင့် ပြန်သုံးကြည့် ၊ ဘာဆိုဘာမှ မဖြစ်ခဲဘူး။ တော်တော်လေးကို သုံးလို့လည်း ကောင်းတယ်။
ပြောရရင်တော့ Marketing နဲ့ ဈေးကွက်ဗျူဟာ တည်ဆောက်ပုံချင်းတွေဟာ ဆင်ဆင်တူတော့မလိုလိုနဲ့ ၁ နှစ်ပြီး ၁ နှစ် ပြောင်းလဲလာလိုက်တာ အခု ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ အရည်အသွေးရော ၊ ဈေးနှုန်း ရော ၂ ဖက်စလုံးက အစစ အရာရာ အဆင်ပြေမှသာ customer ကို ဆွဲခေါ်နိုင်မယ့် ခေတ် ကို ရောက်လာပါတော့တယ်။
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ အဖက်ဖက်ကို စိတ်ခေါ်နိုင်တော့မယ့် Huawei P10 ထွက်ပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ထူးခြားချက်တွေကို ပိုပြီး ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်စေဖို့ ဆိုပြီး အခု တစ်ခေါက် ဆောင်းပါးမှာတော့ ဈေးနှုန်းကစပြီး လေ့လာကြည့်ကြရအောင် လား ။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ စာရင်း အတိုင်း လေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ Huawei P10 ဟာ ဧပြီလား၊ မေ- ဇွန် လား ။ တစ်ခုခုတော့ သေချာလျက်ရှိနေပါပြီး။ ဒီဘက်ခေတ်
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ အပြိုင်အဆိုင်တွေ များလာပြီး ကုမ္ပဏီငယ်လေးတွေကလည်း အရမ်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာနေတဲ့ အတွက်မြန်မာဈေးကွက်မှာ နေရာတစ်ခု ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိထားတဲ့ Huawei အဖို့ကတော့ ဈေးကွက်နေရာဦးဖို့အတွက်ရော၊ အပြိုင်အဆိုင်အကြားမှာ ကြားမညပ်စေဖို့အတွက်ရော April မှာ ထွက်ရှိနိုင်တယ် လို့ ပဲ ခန့်မှန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကာလ မှာ သူ့ကို အဓိက ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ Samsaung S8 နဲ့ LG G6 တို့ ရှိနေပြီး အောက်တိုဘာအတွင်းမှာ အိုင်ဖုန်း ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်စမတ်ဖုန်းတွေက စောင့်ဆိုင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အင်္ဂလန် နဲ့ အမေရိကန် မှာ စတင် ထွက်ရှိမယ့် Huawei P10 နဲ့ Huawei P10 Lite တွေ ဘယ်ဈေးတွေများ ရှိသွားလေမလဲ။
အခုလာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာ MWC 2017 မှာ စတင်ပြသနိုင်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ Huawei ထုတ်ကုန်အသစ်အတွက် Huawei ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲ Richard Yu ကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းပြသမယ့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ချိန်းဆိုထားတယ် လို့ သတင်းတစ်ပုဒ် အရ သိရပါတယ်။ အဲဒီ Confrence ကို နိုင်ငံတကာ က စာနယ်ဇင်းတွေ နဲ့ နည်းပညာဘလော့ဂါတွေကို ကုမ္ပဏီ က ဖိတ်ကြားထားခဲ့ပြီး အံ့သြဖွယ်ရာ ထုတ်ကုန်အသစ် အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးမယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Huawei p9 – ဒေါ်လာ 530/ ပေါင် 449/ သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ 799 နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။Huawei p10 – ဒေါ်လာ 650/ ပေါင် 550/ သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ 900 နဲ့ စတင်ဖို့ များနေပါတယ်။မြန်မာငွေ ဈေးနှုန်း နဲ့ ဆိုရင် ၆ သိန်း ၀န်းကျင်ပဲ ရှိဖို့ များပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ P9 အမျိုးအစား မှာတော့ Huawei ဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်း ဟာ သိတ်ကို ထူးခြားလှခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ ဒီဇိုင်း ကို သာ အမှတ်ပေးရမယ် ဆိုရင် ကနဦး
ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Huawei P6 Ascend နဲ့ Honor တို့ကို ပဲ အမှတ်ပြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု P10 ကိုလည်း P9 ပုံစံ ချိုးထားပါတယ်။ P9 မှာက ဖုန်းရဲ့ ထောင့်စွန်းတွေဟာ အကွေးလေးတွေ နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံစံကို Cured နည်းနည်းကျဉ်းထားတဲ့ ပုံစံပါ။ P9 မှာ ဖုန်း ရဲ့ နောက်ကျောမှာ Dual cameraနဲ့ လက်ဗွေအာရုံခံစနစ် ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ Weibo လူမှုကွန်ယက် နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Rose Gold အရောင် P10 တစ်ခု
အဲဒီအတွက် Huawei ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei P10 ဟာ မျက်နှာပြင် ၅.၅ လက်မ နဲ့ လာပါလိမ့်မယ်။ Quad HD res ဖြစ်ပါမယ်။ အရင် P9 မှာ မျက်နှာပြင် 5.2 လက်မ ရှိခဲ့ပြီး Res က 1920×1080 pixels ရှိခဲ့ပါတယ်။ P9 ကို LCD နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး Multitouch ရပါတယ်။ အရောင်ပိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု 16M အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Pocket lint ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် အရ P10 ဟာ စံချိန်မှီ ၊ တန်းမြင့် အရည်အသွေး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် 2560 x 1440 Res ထုတ်ပေးဖို့ များနေပါတယ်။
ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေ အရ အမြင် နဲ့ ပေါင်းစပ်မှု အပိုင်း ဟာ သိတ်တော့ အနိမ့်စားထဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။
Ultrasonic fingerprint sensor ရဲ့ နည်းပညာ ကို အသစ်အဆန်း အနေနဲ့ Fan တွေ မြည်းစမ်းခွင့် ရလာနိုင်ပါတယ်။
P9 မှာ Android 6.0 (EMUI 4.1) ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ အခု P10 မှာတော့ မဖြစ်မနေ Android Nougat 7.0 ကို သုံးစွဲရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြောင်း ကတော့ Huawei မှာ ရှိနေတဲ့ နောက်ထပ် ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Mate9ကုိုလည်း အောင်မြင်စေချင်သေးတဲ့အတွက် ကျစ်လစ်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခု အချိန်က အရင်ခေတ်ကလို မဟုတ်ဘဲ အပြိုင်အဆိုင်တွေ များပြားလာနေပြီး Spec တွေကို ကျစ်လစ်ဖို ၊ ချုံ့ဖို့ထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ပဲ စဉ်းစားရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် P10 မှာ ခိုထားတဲ့ Spec တွေ မြင်လာရဖို့ မရှိပါဘူး။
2.3GHz octa-core ကို သုံးစွဲပါလိမ့်မယ်။
ဆီမီးကွန်ဒပ်တာတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ HiSilicon ရဲ့ အထူး ထုတ်ကုန် ဖြစ်တဲ့ Kirin 960 chip ကို သုံးစွဲသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ P9 မှာတုန်းက Kirin 955 processor ကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်တွေအရ P9 ဟာ အတော့်ကို မြန်ပြီး အဲဒီ မြန်ဆန်မှုတွေ နောက်က တခြား Side Effect တွေလည်း နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ပဲ Dual ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းမှာ iPhone7လိုမျိုးပဲ အမှတ်အသား ပြုခံခဲ့ရတဲ့ Huawei ရဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ် အဖြစ် လာတော့မယ့် P10 ဟာ P9 ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွေကို အမွေဆက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပီလား လို့ ကြည့်ရအောင်။
အရှေု့ဖက် ကင်မရာ 8 Megapixel၊ ကျောဘက် ကင်မရာကိုလည်း Dual Camera 12 Mega pixel အဖြစ် ဆက်လက် ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ တခြား အထူးအထွေ မခန့်မှန်းထားကြပေမယ့် GR5 မှာ ရှိတဲ့ အမိုက်စား ၊ အလန်းစား လုပ်ဆောင်ချက် တချို့ က P10 ကို ကူးပြောင်း အိမ်ဖွဲ့ လာနိုင်တယ် လို့ လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Huawei P10 ဟာ 3400 mAh အထက် ပေါင်းစပ်လာပါလိမ့်မယ်။
အခု ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတွေဟာ အားလုံး က ခန့်မှန်းသတင်းတွေချည်းပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ က ရှိနေတဲ့ P10 သတင်းတွေဟာလည်း ခန့်မှန်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ်ပြီး တွေးတောလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ Product Rumors လို့ ခေါ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ခန့်မှန်းသတင်းတွေ ဟာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအ ထိ မှန်ကန်မှု ရှိခဲ့ပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ယုံကြည်ပါတယ်။
P9 ဟာ Ceramic White, Titanium Grey, Mystic Silver, Haze Gold, Prestige Gold, and Rose Gold အရောင်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။p10 အတွက် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အရောင် က Rose Gold ပါ ။ ပန်းသွေးကြွယ်တဲ့ ရွှေနှင်းဆီရောင် ပါ။
Huawei P9 – Screen size – 5.2″ RAM 3GB-Storage 32GB/4G-Storage 64GBHuawei P9 plus – Screen Size – 5.5″ RAM 4GB/Storage 64GB
Huawei P10 – Screen size – 5.5″ RAM 6GB-Storage 64GB/8GB -Storage 128GBHuawei P10 plusHuawei P10 Edge
တွေ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်လာနိုင်တယ် ဆိုရင်လည်း အံ့သြစရာ မရှိပေမယ့် P10 Edge ကတော့ High Tech Level ဖြစ်သွားနိင်ပါတယ်။
ဒါက Huawei P10 Official ဖိုင်ပါ။
•°•°•°• Video ဖိုင်အားကြည့်ရှု့ရန် •°•°•°•
☏ - 09-32227000 , 09-974373000y
Hello R100 Deadboot / Logo Stop / Imei - All Fix 100% Test
7:19 PM today's Blog No comments
Hello ထဲမှာ error အများဆုံးဖြစ်တဲ့ R100 အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Software errorနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဖြစ်တက်တဲ့ Deadboot / Logo Stop / imei error
တို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ဖြစ်တဲ့ error ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်ရာဖိုင်ကို ရယူအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
•°•°•°• Download Link For Hello R100 Deadboot Fix •°•°•°•
•°•°•°• Download Link For Logo Stop error Fix •°•°•°•
Today's MobileTraining & Service center
7:04 PM today's Blog No comments
Miracle Box Crack များကိုစုစည်းပေးထားတဲ့ Setup ဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Miracle Box Crack သုံးရင်းဖြစ်တက်တဲ့ Start Button error / Virus error တို့ကို
ဖြေရှင်းစရာမလို Crack ဖြစ်အောင်ပြု လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သုံးချင်တဲ့ကောင်ကို
ဖွင့်ပြီး သုံးလိုက်ရုံပါပဲ။ လွယ်ကူလျှင်မြန်တာကြောင့် စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
•°•°•°• Miracle Box Crack 8 in 1 Setup Download Link •°•°•°•
Samsung ဖုန်းတော်တော်များများ Zapya Application ကြောင့်စက်ဟန်း
5:07 AM today's Blog No comments
Samsung ဖုန်းအသုံးပြု သူတော်တော်များများနဲ့ပတ်သတ်ပြီး
service ပိုင်းမှာတွေ့နေရတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ service ပြု လုပ်ဖို့
လာပြတဲ့တော်တော်များများ Samsung ဖုန်းတွေမှာ စက်ဟန်းနေတာနဲ့
Firmware ကျနေတာနဲ့ Auto Restart တွေဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီပြသနာကို အသုံးပြု သူများထံမှကြားသိရတာကတော့ Zapya နဲ့ data transfer
ပြု လုပ်ရင်းဖြစ်တာလို့ သိရှိရပါတယ်။ Zapya apk ဟာစတင်ထွက်ရှိလာထဲက Samsung
ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ အသုံးပြု ရန်ကိုက်ညီမှု့မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
user တွေအနေနဲ့ကလည်း data transfer လုပ်ရန်ဒီ apk လေးကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်
နေတာကြောင့် သုံးကြရင်းကဒီ error နဲ့ကြုံ နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာကလည်း
Firmware ကျလို့ပြန်တင်တဲ့အခါမှာ အမှားမခံတာကြောင့် Samsung ဖုန်းအသုံးပြု သူများအနေနဲ့
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Zapya apk ကို မသုံးမိကြရန်တိုက်တွန်းပါတယ်။
Zapya အစားအသုံးပြု ချင်ရင်တော့ Xender apk သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် Zapya ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေတိုက်ရိုက်
ရယူအသုံးပြု ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝအဆင်ပြေမယ်တော့မပြောနိုင်ပါ။
အချို့အလုံးတွေမှာတော့ Google Play Store ကရယူပြီးသုံးရင်း အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာ ၂၁ နေရာမှာ Wifi အခမဲ့အသုံးပြု နိုင်ပြီ
4:38 AM today's Blog No comments
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာ ၂၁ ခုမှာ Wifi အခမဲ့အသုံးပြု နိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
Global Technology Group မှစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Wifi ရဲ့ name ကိုတော့ 5BB Broadband နံမည်နဲ့လွှင့်ပေးထားတာပါ။
Wifi ရယူအသုံးပြု နိုင်မဲ့နေရာများကတော့
(2) ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)
(3) နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (UFL)
(4) Yangon International Airport
(7) ကရ၀ိတ် ဥယျာဉ်ကမ္ဘာ
(9) Ya Kun Coffee & Toast (Yangon International Airport)
(10) Lotteria (Peral Condo)
(11) Lotteria (6.5 Miles)
(12) Lotteria (China Town)
(13) Eatfinity Thai Food
(14) Shwe Kaung Hot Pot (Bahan)
(16) Harmony (လှိုင်တက္ကသိုလ်)
(17) Café Milano
(18) LA Bar
(19) 7th Joint Bar & Grill
(20) DIY BBQ & Hot Pot
(21) Happy Cafe & Noodle(အင်းယားလမ်း) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါနေရာများအပြင် အခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ရန်
ညှိနှိုင်းမှု့များပြု လုပ်နေကြောင်းလည်း ကြားသိရပါတယ်။ လက်ရှိနေရာ
များတွင် Wifi အခမဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြု ချင်ရင်တော့ အတွက်အောက်ပါ
- မိမိရဲ့ Device မှာ Wifi ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
- 5BB_Free_Wifi_xxx ကိုရွေးချယ်ပါ။
- Broswer ကိုနှိပ်ပြီး Accept ဆိုတာကိုနှိပ်ကာ ချိတ်ဆက်ပြီး စတင်အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
Android တွေအတွက် Root ဘုရင် Kingroot apk v5.0.2 latest version
6:01 AM today's Blog No comments
Android ဖုန်းများအတွက် Root ဘုရင် Kingroot apk ရဲ့ latest version ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ apk ကတော့ ကျတော် v5.1.1 မှာစမ်းကြည့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Root နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း version တွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ Root
နိုင်ဖို့ Kingroot apk ကိုရယူလိုက်ကြပါ။
•°•°•°• Kingroot v5.0.2 latest version Download Link •°•°•°•